नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेडका मजदूर हडतालमा
समाचारबिहिबार, १३ मंसिर , २०७५
जलविद्युतका उपकरण निर्माण गर्ने मुलुककै ठूलो कम्पनी नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड (एनएचई)का मजदूर हडतालमा उत्रेका छन्।
बुटवलस्थित उक्त कम्पनीले जलविद्युत परियोजनाहरूका लागि उपकरण निर्माण, जडान र मर्मतको काम गर्छ। कम्पनीका मजदूरले ७ मंसिरदेखि सातबुँदे माग अगाडि सार्दै काम ठप्प पारेका छन्।
हडतालका कारण बुटवलस्थित मुख्य कार्यलयसँगै देशभर दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला विद्युतगृह, सब-स्टेशन र निर्माणाधीन परियोजनाहरूको काम प्रभावित भएको छ।
दुई वर्षदेखि सुविधा नबढेको र आफूहरूले अगाडि सारेका मागहरू प्रति व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको कारण हडतालमा उत्रिनुपरेको मजदूर नेता अमितबहादुर आचार्य क्षत्रीले बताए। श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका सुविधा प्रदान गर्नु साटो व्यवस्थापनले खाईपाई आएका सुविधासमेत कटौती गर्न खोजेको उनले बताए।
अर्का मजदूर नेता भुवन गिरीले आफ्ना माग पूरा गर्न वार्ता गर्नु साटो व्यवस्थापन पक्ष कम्पनी नै छाडेर हिँडेको बताए। उनले भने, “हाम्रा माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोक्दैनौं।”
समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड र अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर युनियनले रु. ८ हजार ५ सय तलब वृद्धि गर्न माग गरेका छन्। यस्तै, क्यान्टिन, पोशाक र आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने हुनुपर्नेलगायत माग मजदूरले अगाडि सारेका छन्।
२०४२ सालमा रु. १३ करोड लागतमा उक्त कम्पनी स्थापना भएको हो। बुटवलमा १५ बिघामा आधुनिक संरचना छ र अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति छ।
कम्पनीमा मजदूर र कर्मचारी गरी १७८ जना कार्यरत छन्। कम्पनीले भर्खरै चमेलिया जलविद्युत परियोजनामा उपकरण जडान सम्पन्न गरेको छ। अहिले रसुवाको ५४ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत परियोजनासँगै २५ वटा सब-स्टेशनमा काम गरिरहेको छ।
कम्पनीमा बुटवल पावर कम्पनीको ५१.३१ प्रतिशत शेयर छ। यस्तै, आईकेएन इण्डस्ट्रियल नर्वेको ४६.९०, बुटवल टेक्निकल इण्डष्ट्रिजको १.०७ र हिमाल हाइड्रोको ०.७१ प्रतिशत शेयर छ।
मजदूरको हडतालबारे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रत्नसंसार श्रेष्ठले प्रतिकृया दिन चाहेनन्। काठमाडौंमा रहेका उनले हिमालखबरसँग टेलिफोनमा भने, “म बैठकमा छु। पछि कुरा गरौंला।”